מדריך מלא לצ'אט בטוויטר לבעלי עסקים קטנים
Hazvibatsiri kana iwe uri muchengeti wakanyatsogadziriswa קנה mubhadhadzi webhizinesi – nebatsiro מחדש טוויטר, unogona zvechokwadi kuunza zvinotungamirira munguva shoma. Munhasi makwikwi enyika, mapuratifomu akaita se טוויטר קנה Instagram Instagram anotaridzirwa kuti ane simba rakanyanya rekutengesa chero chero marimi.
קנה אני חושב שאתה בינזייסי דוק uye unoda כווית הוונדו hwekutungamira, אני מכיר ללא הגבלה משחק שיווק בטוויטר יאקו. Na zvinopfuura 300 mamiriyoni anoshingaira pamwedzi vanoshandisa, iyo Iichakupa אני משתמש ב anenzanisikwi ruvoko rwekugadzira mararamiro ako kumagariro evanhu.
2 טוויטר לדור לידים
3.2 2. צ’אט טוויטר inzwisise inoshanda
3.3 3. Iva אנחנו טוויטר מנוסים apo uchibvunza mibvunzo
4 לוח זמנים לצ’אטים בטוויטר
5.1 1. זיוי זווינוגונה קוטונגאמירירה
5.3 3. איטה סימבה ראקו
טוויטר ndeimwe yepamusoro-soro yevanhu vanoita nhepfenyuro kunze uko inopa nzira isina kugadzikana yekubatana nemagetsi uye zvinokurudzira. Nhamba idzi dzinotevera dzinobudiswa ne Twitter, dzichipa kungoona zvishoma zvayo kusvika.
טוויטר לדור לידים
חלונית nzira dzakawanda dzomunhu anogona kushandisa טוויטר nekuda kwekutungamirira. Kubva pakuitisa kupaaways kubata chirongwa chekurarama, denga ndiro muganhu. Imwe yenzira dzakanakisisa dzekutaurirana nevanhu vakawanda vakaita semafungiro uye kugadziriswa semutambi akakurumbira mumhizha ndeyokuita nevezve dzimwe nhau dze טוויטר.
Iwe unokwanisa kugoverana cana kupinda mharidzo you Twitter kuitira kuti kuparidze kusvika kwehuwandu hwechikwata chako pa טוויטר, Icho chinogona kusimbisa bhizinesi rako duku munguva refu. Sezvaungave watoziva kare, mukutaura kwe טוויטר, vatori vechikamu vakasiyana vanotaura pamusoro pehurukuro inowanzoshandisa uchishandisa hashtag yakasarudzwa.
Chimiro chayo chakasununguka chinokwezva vazhinji vevatori vechikamu vari munharaunda yavo. Nokupinda mumisangano yakasiyana, unogona kupinda mukutaura nevanhu vakakosha uye vanokurudzira vanogona kukubatsira kukura bhizinesi rako. Uyezve, nekugadzirira kukurukurirana, unogona kugadzira mararamiro pamusoro pe טוויטר nekukwevera vamwe vatengi zvakare.
Hapana chakakunetsa pamusoro pekuti iwe hauna kutora mukana wekutaura ne Twitter kare. Nokutevera mafungiro aya anofungisisa, iwe unenge uri pro pa Twitter chat in a time.
Uuu ndiwo mutemo wegoridhe wekutora mukana wekutumira טוויטר. Iwe haugone kuisa nguva yako inokosha kuburikidza nekungosangana nemhando dzekutaura dzisingabatsiri kune bhizinesi rako. Sezvo muzvinabhizimisi, iwe unofanirwa kuisa pfungwa pakutsvaga mhirizhonga dzinouya dzinoenderana nekambani yako.
חלונית zvakawanda zvekushandisa uye kutaurira mazita kunze uko izvo zvingakubatsira iwe kutsvaga sangano rinouya. Zvimwe zvemasikirwo anozivikanwa ndiwo Twubs, יומני הצ’אט, סלט צ’אט uye.
Uyezve, iwe unogona kushandisa nguva dzose rubatsiro rwe טוויטר חיפוש מתקדם kutarisa kumusoro kwekutaura kwakakosha. Yakafambira mberi tsvakurudzo inogona kukubatsira kutarisa machechi ארי kutorwa nevatambi vanotungamirira. Iwe unokwanisa kutsanangura mamwe mazita e-akhawunti mu "אנשים" chikamu chekutsvaga zvigumisiro zvako.
צילום מסך מתקדם של טוויטר
Zvakanaka, iwe unofanira kutanga nokupa mazwi anokosha mumutsara we "מילים" wekutsvaga. Mushure mekunge, iwe unogona kungoita zvigadziriswe zvishoma kuti uwane migumisiro yakakosha. Shandisai dzimwe dzenguva dzinofadza zvikuru dzekutaurirana uye uzviwedzere kukerenda yako kuitira kuti zvinhu zvitange.
2. צ’אט טוויטר inzwisise inoshanda
Mushure mokuzivisa zviitiko zvishomanana zvinouya kuGoogle, usangomhanyira muzvinhu. דינמיקה של טנגה nekucherechedza dzinobatanidzwa munyaya ipi אתם טוויטר.
Iwe unogona kusangana nemakambani mashomanana akachengetwa zvakanaka חלונית izvi zvakare. Edza kuvhara mukati uye kutsvaga zvinokonzera kukurudzira zvine chokuita nekambani yako. Uyu mutungamiri panzvimbo yangu ichakubatsira אניwe kunzwisisa nzira yekutora nhengo mu צ ‘אט צ’אט.
Somuenzaniso, imwe yenzira dzekutora dzaunogona kuwana ndeyekuti nokungwarira hashtag inoshandiswa nevatori vechikamu vakasiyana panguva yekutaura. איסו שיווק טינוזיבה סימבה מחדש. Izvo zvave zvichicherechedzwa izvo tweets ne hashtag inenge kaviri kubatanidzwa kupfuura ma tweets anowanzosina asina hashtags.
Uyezve, צ’אטים בטוויטר ndezve kwete kungosimudzira bhizimisi rako.
Iwe haufaniri kumbonyadzisa kuzvidzora paunenge uchitaura nevamwe. Nokufamba kwenguva, iwe uchaziva kuti טוויטר צ’אט inoshanda sechirongwa kuti uwane mukana nevanhu vakawanda-kana kuti kugadzira mararamiro ako nenzira yakanatswa.
Ndine chokwadi chokuti פטריות mokucherechedza machechi mashomanana, iwe unonzwisisa simba rayo uye ungatanga kuvhara yako inzwi rehurukuro usati watanga kukurukura nevamwe.
3. Iva אנחנו טוויטר מנוסים apo uchibvunza mibvunzo
Zakawanda dzepaIndaneti dziri kutambira vamwe vaenzi uye vanotungamirira nyanzvi, vanokurukurirana nevamwe vanhu. כלומר unofanira kushandisa mukana uyu nekuchenjera paunobvunza mibvunzo inofungisisa kune vaenzi ava.
Usave wakanyatsojeka uye unouya nemubvunzo chaiwo uye wakanyatsogadzirwa. Nguva dzose טאורה nezvesarudzo yakasarudzwa mu ציוץ yako uye inosanganisira kugadzirisa kwemuenzi / mubatanidzwa iwe uri kutaurirana naye.
Uyewo, usaisa ספאם mharidzo paunenge uchibvunza mubvunzo iwoyo kune vashandi vakawanda panguva imwe chete. Kana muenzi asiri kupindura kumubvunzo wako, ingoenderera mberi kumubvunzo unotevera קנה קומירירה קווקנגובה. Usaisundira kana kuedza zvakaoma kuti uonekwe.
Kwete chete vashanyi, iwe unofanirawo kuedza kuyanana nevamwe vatori vechikamu. Kune zvakawanda zvevanhu vanofambisa kunze uko vanoramba vachiita nhengo dze טוויטר nharo kuti vawedzere denderedzwa yavo. Iwe unogona kutanga nekutsvaga hukuru hunopikisa uye ramba uchikurukura navo kunyange קאנה kambani yapfuura.
קוניאנגה, קנה uchitaurirana nevamwe, unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unoramba uchiita izwi rako. Mushure mezvose, ndiyo bhizinesi renyu rebhizimisi ramunomiririra. Mikana ndeyokuti vanhu vangazokubvunza nezvemakwikwi ako munguva yekutaura. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unobata mibvunzo yakadaro yakachenjera nokuchenjera.
Kana iwe usina chakanaka chekutaura pamusoro peimwe mimwe mavara, zvino chengetedza kusarerekera kwematongerwe enyika. Usatumira chero chakaipa pamusoro pevadzidzi vako paunenge uchitaura nomumwe munhu. Uyewo, usatumira chero chinhu chinokugumbura קנה chinangwa chekutonga paunotumira ציוץ. איווה wakazvidzivirira uye edza kuwana chimwe chinhu chinobudirira kunze kwekukurukurirana kwako.
יואקה, אני אומר uripo kuti uwedzere mararamiro ako pa טוויטר uye באמצעות גאקבה שלitiiti. Taura kuvonga kwaunoita kune vamwe panzvimbo uye upedze kukurukura nenzira yakanaka kuti usiye pfungwa dzekusingaperi kune vamwe.
לוח זמנים לצ’אטים בטוויטר
חלונית פנו vashoma טוויטר צ’אטים unogona kubatana kuti uone hupe,
#VCBuzz הוא צ’אט שבועי בטוויטר מאת @seosmarty. @SanaKnight, mutungamiriri אנחנו #VCBuzz anopa sumo pfupi,
Vhiki imwe neimwe tine muenzi mutsva uye nheyo mutsva inosanganisira chimwe chezvinhu zvizhinji zvekutengesa internet. Vadzidzisi vedu vanogovana ruzivo rwavo, zvishandiso, mazano, zvidzidzo zvekare, nezvimwe. Mukuwedzera kune iyo #VCBuzz ine mharaunda yemusangano apo munhu wose anokwanisa kugovera pfungwa dzavo nekubvunza mibvunzo yakawanda nokuti isu tose tinoungana pano kuti tibatsirane! Kutungamira mitsva yedu yatinoshandisa http://twchat.com/ -Chinhu chepamhepo chepamhepo chakashandisirwa nzira yekuita kuti kutaura kwe טוויטר אתה יכול לשוב את כל המלונות שלך..
Bata #VCBuzz מנגוואני אחר 12:00 EST.
#SocialROI ivhiki nevhiki טוויטר צ’אט yakabatwa na @MadalynSklar uye inotsigirwa ne @ManageFlitter. @ katefrappell- גדזירה מוטונגאמירי paManageFlitter, inopa mhedziso אתם # צ’אט סוציאליROI:
#SocialROI yakatanga muna ינואר 2017 משווקי מדיה חברתית, Vatungamiri, VaMabhizimisi Vepamabhizinisi uye ManageFlitter vatengi. Hurukuro inoshumira semusangano unokosha umo nyanzvi dzemabhizimisi, vatashanyi vakasiyana uye vanopa mugove vanogoverana pfungwa dzavo nemanzwiro pamusoro pezvimwe nyaya dzine chokuita neVanhu veMagariro evanhu. Vatori vechikamu havangotauri chete kugovana ruzivo rwavo, asiwo vadzidza zvakawanda mazano uye mazano kubva kune vezera ravo.
הצטרף ל- #SocialROI zuva rimwe nerimwe 18:00 EDT / 15:00 PDT.
טרה ג’קסון aka @MsMadamMoney ndiyo nyanzvi inozivikanwa mune zvemari. Anopa #CashChat kukurudzira vateereri munyika yose kuti vave nehukama hwakanaka nemari yavo. Tarra inoratidzirwa # 3 kune Vakuru veMatambudziko Ekutevedza Kutevera על טוויטר.
#CashChat ndeimwe yepamusoro yevashanu vhiki imwe neimwe inopindirana yemari yemari צ’אטים pamusoro pe טוויטר. Vabatanidzwa nevashanyi rudzi rwemhinduro dzemibvunzo kubva kumubati, טרה, achishandisa shanduko yepajw.org טוויטר. Chinangwa che #CashChat ndechekubatsira vanhu kudzidza mazano uye mazano ekuvandudza קאנה kuwedzera mari yavo uye kukweretwa kwekwereti kwehutano hwakanaka hwehutano.
הצטרף ל- #CashChat Vhiki yoga yoga kubva ku12pm ET.
#ChatSnap ndiyo yekutanga uye yega טוויטר צ’אט הכל אודות Snapchat. Hurukuro yakatanga musi waChris 16, 2016, uye yakarongedza zvishoma kubva kunyika kubvira muChishanu 1, ikashandisa mazana evatendi vhiki nevhiki kuzokurukura nyaya dzakapoteredza Snapchat. Kristy akakoka kune 40 + vashanyi vanokosha kuti vabatane nekutaura kwake. #ChatSnap הוא rakanyorwa naHootsuite sezvinonzi צ’אט למעלה טוויטר למדיה חברתית vatengesi kuti vatevere.
Bata #ChatSnap Chitatu chega chega paC2 pm ET / 11 am PT.
זבקאנאקה! סאקה ikozvino קנה iwe uchiziva zvose nezve טוויטר nhaurirano, unogona kunge uchikumbira chii chiri mairi kwandiri. Sezvakataurwa, nhau טוויטר inogona kukubatsira iwe kukura bhizinesi rako duku nenzira isina kufungidzirwa. Iwe unogona kuva nehuwandu hwepasi עלה uye uwane kuvimbika kwevabereki vako nayo. Hewa dzimwe nzira dzakananga dzokuti kugamuchira kana kujoinha טוויטר macheza kunogona kubatsira bhizinesi rako.
1. זיוי זווינוגונה קוטונגאמירירה
Nokuva kushamwaridzana nevamwe vanhu vane mafungiro akafanana, unogona kugovera hurukuro dzakawanda uye kuziva avo vanozotarisira vatengi nyore nyore. Paunenge צ’אט טוויטר שלך, אני חושב unofanirwa kusarudza nyaya yakakodzera. Inofanira kuwirirana nevateereri vako uye kuvakurudzira kuti vatore chikamu muhurukuro. Izvi zvichakubatsira iwe kuumba nzvimbo yako yakasiyana חלונית zvekugarisana nevamwe.
Uyezve, ichakurudzira vamwe vatori vechikamu kuti vataure newe kana vasina chokwadi. נגובה יוואנושאניירה purogiramu יאקו, vachazoziva nezvebhizimisi rako. Sezvo kuitisa טוויטר צ’אט kunokwezva vamwe vanhu vatove vakabatana nemhizha yenyu, Ichakupa mukana wakanakisisa wokuratidza mazvinhu / maitirwo enyu.
Haungati אני chete unokwanisa kuwana vwati vakawanda pa טוויטר, asi iwe uchawanawo mukana wekushandura v whati ava kune vatengi vako zvakare. Nemuenzaniso, היי nzira yakakwana yekupinda mukutarisana nemitungamiri yako.
Bhizinesi rega rega rinoda kuvaka yavo yepamhepo nharaunda kuitira kuti ive nezvimwe zviitiko zvekuita mune ramangwana. Ita kuti vateereri vako vabatwe paunenge uchitaura navo kuburikidza nechikamu cheQ & קנה נוקונגוטורה vashanyi vashoma. Izvi zvinopa vateereri vako mukana wekutaura kune vanotungamira indasitiri nyanzvi uye kutaurirana nemumwe.
שיחות טוויטר Nokuita, אני אומר unogona zvechokwadi kupa zvinhu zvinokosha kune vateereri vako nenzira yakakurumidza uye isina maturo. Ichakubatsirawo kugadzirisa mibvunzo yavo קאנה kusimbisa vatsigiri vako. היינו מואנצניסו ווקוואוואנה ווקובאטאניידזה נהארונדה יאקו פמווה צ’טה.
3. איטה סימבה ראקו
Mushure memubatanidzwa mune dzimwe nhaurirano, iwe uchava nhengo inoshanda yevanhu ve Twitter. Iwe unogonawo kutanga kutumirwa kuti uve muenzi חלונית dzimwe nharo dze טוויטר zvakare. Izvi zvingava zvakakosha zvikuru, kwete kungoita chimiro chako chechigadzirwa, asiwo chekuita iwe pachako.
Uyezve, unogona kugovera yako pfuma (mabhuku ebhuku, mabhizinesi, uye nezvimwewo) kune vamwe vachiratidza chimwe chinhu. Izvi zvichasimbisa huwandu hwehuwandu hwehupenyu hwako. Kana zvikaitwa nekuchenjera, izvi Zvinogona kuita zvishamiso zvechinhu chako chemufananidzo pa טוויטר.
Hapana munhu anokwanisa kuramba simba rekutsvaga kutengesa. Hazvina mhosva kuti mararamiro ako makuru קנה maduku-kuburikidza nokutora rubatsiro rwemhando yakakodzera yevanhu vanopesana, unogona kusvika kune rumwe ruzhinji rwevateereri munguva shoma.
Maererano nekuongorora kwechangobva kuitika, yakawanikwa kuti 70 muzana yevanhu vangada kuziva nezvehupenyu hwechigadzirwa panzvimbo yekutaridzirwa kune zvizvarwa zvezvizvarwa. Yakaenda iyo mazuva apo chero zvinyorwa zvinoshandiswa zvinogona kukubatsira kubhadhara zvakawanda zvevatengi. Mazuva ano, marwendo ארי kufamba maira imwe chete kuti ape ruzivo runobatsira kune vatengi vavo.
צ’אטים בטוויטר ichakupa chete iyo yakarurama yekukwirirana nekukwira קוומה משפיעים. Mushure mokunge mavaziva, munogona kutamisa zvinhu mberi uye muve neukama husingaperi navo.
Iwe haugone kuva mutungamiri wekambani קנה iwe באמצעותagari wakarongedzwa nezvose zvinoenderera mberi maitiro. Yakawanda yevhiringidzi אתם טוויטר inobatanidza קנה zvidzidzo zvemangwana קנה rudzi rwemashure ארי קיטה zvinyorwa munguva ino.
Uyezve, kana iwe nguva dzose uchida kuramba uri pamusoro pemutambo wako, shandisai hashtag chekucherechedza kuti uwane zvinyorwa zvenguva-nguva zvine chokuita nezwi rekkuta kana kuti hashtag. חלונית zvakawanda zvekugarisana nevanhu vanoteerera uye vanotora zvigadzirwa zvevatengesi vanogona kuita kuti basa rako rive nyore nyore.
Kukosha Chinonyanya, Chichakupa אני משתמש ב- Aenzanisisi Kuwana Kuti uwane Shoko Kunze uko pamusoro pekasa rako. Zvakanaka, mabhizimisi maduku haawani mukana wekuve kunze uko kana kutsigira zviitiko zvemarudzi ose. Kunyange zvakadaro, kuburikidza nekugadzirisa kukurukurirana קנה קובאטה rudzi rwakanaka rwevanhu vanopesana, unogona kusvika kune zviuru zvevanhu.
Zvose izvi zvinogona kukubatsira kukurudzira marimi ako pa טוויטר kusvika pamwero mukuru. Iwe unogonawo kukwanisa kugadzira ukama-ne-umwe nevateereri vako uye ivo vanozokoshesa zvaunoedza kuburikidza nekuva iwe wakatendeka mutengi pamwe chete. Iwe unogonawo kubatana nemamwe mabhuku anotungamira akadai.
Enda mberi uye shandisa hurukuro yako inotevera אתם בטוויטר! Ndine chokwadi kuti zvichava ruzivo rwakakura kwauri uye iwe ungagumisa kuwana mimwe mitungamiri yebhizimisi rako.
Pankaj Narange ndiye mubatanidzwa we Socialert uye nyanzvi yehuwandu hwemagariro ehupfumi nekugadzirisa. Socialert inyanzvi yututi hutsvaga, kuitira kuti iwe uone nyore uye kutarisira basa מחדש טוויטר nekuda kwechikwata צ’אקו.